कोरोना प्रभावित इटलीलाई ज्याक माले गरे ५ लाख मास्क प्रदान, सहयोगी मनका धनी ब्याक्तित्वलाई सम्मान स्वरुप शेयर गर्नुहोस!::Point Nepal
कोरोना प्रभावित इटलीलाई ज्याक माले गरे ५ लाख मास्क प्रदान, सहयोगी मनका धनी ब्याक्तित्वलाई सम्मान स्वरुप शेयर गर्नुहोस!
काठमाडौ। चिनियाँ खर्बपति ज्याक माले इटलीलाई ५ लाख मास्क प्रदान गरेका छन्।ज्याक माले आफ्नो फाउन्डेसन ‘ज्याक मा फाउन्डेसन’ र आफ्नो कम्पनीको ‘अलिबाबा फाउन्डेसन’मार्फत इटलीलाई ५ लाख मास्क प्रदान गरेको सिन्ह्वाले जनाएको छ।
चीनपछि कोरोना भा,इरसबाट सबैभन्दा ग्र’स्त मुलुक इटली हो। ज्याक माले मास्कहरु एक कार्गो विमानमा पठाएका थिए। उक्त विमान बेलिजियममा अ,वतरण गरिसकेको र त्यहाँबाट ट्रकले मास्कहरु इटली लाने जनाइएको छ।
ज्याक माले शुक्रबार पनि अमेरिकालाई ५ लाख स्वास्थ्य सामाग्री स,हयोग गरेका थिए। इटलीमा हालसम्म कोरोनाबाट १७ हजार ६६० सं’क्र’मित बनेका छन्। त्यहाँ १२ सय ६६ को मृ’त्यु भइसकेको छ।
चीनमा भने कोरोनाबाट सं’क्रमित र मृ’तकको दर घट्दै गएको छ। चीनले कोरोनाको प्र’भाव चीनमो अन्त्य भएको घो,षणा गरिसकेको छ। यसबीचमा इटली भने कोरोनाबाट थप प्र’भावित बन्दै गएको छ। हाल इटलीका सबै ६ करोड नागरिकलाई घरबाट निस्कन दिइएको छैन। शैक्षिक संस्था, खेलकुदका गतिविधि सबै ठ’प्प छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आज शनिबार नै इटलीलाई कोरोनावि’रुद्धको अभियानमा स,हयोग गर्ने प्रतिब’द्धता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार मात्र चीनले आफ्ना ९ विज्ञको टोलीसहित २० टन स्वास्थ्य सामाग्री इटली पठाएको थियो।
पल शाह भगवान बनेर कालिकोटमा पुगे,यति धेरै राहत बि:तरण गरे (हेर्नुस् भिडियो )
उपचार नपाएका गरिबको लागि भगवान बन्दै रवि, महावीर र भीम सम्मान स्वरुप शेयर गर्नुहोस !
पल शाहले अक्सिजन नपाएका संक्र’मितलाई बचाउन सुरु गरे यती ठूलो अभियान …सम्मान स्वरुप शेयर गर्नुहोस।
आफ्नो तिज खर्चले खोटाङको पहिरो पि डित लाई सहयोग गर्ने ईशा गुरुङ लाई हार्दिक नमन,,,सम्मान स्वरूप सक्दो सेयर गरौ।
तपाईंहरूको १ सेयरले मनकारीसम्म पुगेर प्राप्त रकमबाट कृत्रिम खुट्टा हाल्न चाहन्छु –छोङबा शेर्पा , स,हयोग गर्न सकिने माध्यम तल रहेको छ हेर्नुहोस!
नायिका ऋचा शर्माले गरिन् रंगशाला निर्माणलाई यति धेरै रकम सहयोग…हेर्नुहोस!